X-Rated - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့သောလိင်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
X-Rating: အမေရိကန်နှင့်ဆက်စပ်လိင်သဘောထားနှင့်အပြုအမူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ (2009) ကိုအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု
ဂျေသက်ကြီးရွယ်အိုများစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurol ။ 2008 ဒီဇင်ဘာ 10 ။
လေ့လာမှုအပြည့်အစုံ - PDF
ဘရောင်း JD, L 'Engle KL.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဂ္ဂဇင်းများအတွက်အသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုနှင့်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ (ဆိုလိုသည်မှာ, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် erotica) အားထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်ခန့်မှန်းနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူ, X-rated ရုပ်ရှင်များ, နှင့်အင်တာနက် (အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနမူနာတစ်ခုအလားအလာစစ်တမ်းများတွင်လေ့လာခဲ့ကြသည်အခြေခံ = 13.6 နှစ်ပေါင်းမှာပျမ်းမျှအားဖြင့်အသက်; N ကို = 967).
အမျိုးသမီး၏ယောက်ျား၏သုံးပုံနှစ်ပုံ (66%) နှင့်တစ်ဦးထက်ပို-တတိယ (39%) အတိတ်ကာလတစ်နှစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏အနည်းဆုံးတဦးတည်းပုံစံမြင်ဘူး။ အခြေခံမှာ, အနက်ရောင်ဖြစ်ခြင်း, အဟောင်းတွေဖြစ်ခြင်းများနှင့်လျော့နည်း-ပညာတတ်မိဘများ, နိမ့်လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများနှင့်အာရုံခံစားမှုအဘို့အမြင့်မားရန်လိုအပ်ကြောင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးပိုမိုထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်ရှိခြင်း။ longitudinal ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအထီးအဘို့အအစောပိုင်းထိတွေ့မှုနည်းသောတိုးတက်သောကျားမအခန်းကဏ္ဍသဘောထားများ ပို. အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ကျူးလွန်ဟောကိန်းထုတ်နှင့်နှစ်နှစ်အကြာတွင်ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းကြောင့်ပြသခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်အစောပိုင်းထိတွေ့နောက်ပိုင်းတွင်လျော့နည်းတိုးတက်သောကျားမအခန်းကဏ္ဍသဘောထားတွေဟောကိန်းထုတ်နှင့်ခံတွင်းလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်း။ ကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မှ - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2012):
2009 ခုနှစ်တွင်ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle ရဲ့တွေ့ရှိချက်များ et al H¨aggstr¨om-Nordin ၏လေ့လာမှုများထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ (2005) နှင့် Kraus နှင့်စယ် (2008), အထူးသ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှအစောပိုင်းထိတွေ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးမြီးကောင်ပေါက်နှစ်ခုလုံးကိုအစောပိုင်းက၎င်းတို့၏ Non-ထိတွေ့ရွယ်တူချင်းထက်ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမည်ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ဤလေ့လာမှု၌, 66 အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ယောက်ျားနှင့် 39% ၏% (N ကို = 967) 14 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်သူတို့ကအရင်နှစျတှငျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး၏ 90% ပါးစပ်လိင်ဆက်ဆံအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် 88% လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။